प्रचण्ड त च्याँखे थाप्न सिपालु नै हो, किन उहाँ अर्ली ईलेक्शनको पक्षमा हुनुहुन्न ? : महेश बस्नेत (भिडिओसहित) « रिपोर्टर्स नेपाल
प्रचण्ड त च्याँखे थाप्न सिपालु नै हो, किन उहाँ अर्ली ईलेक्शनको पक्षमा हुनुहुन्न ? : महेश बस्नेत (भिडिओसहित)
काठमाडौं, १९ कार्तिक । नेकपा (एमाले) का प्रभावशाली नेता तथा पूर्वमन्त्री महेश बस्नेतले नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई च्याँखे थाप्न सिपालु नेताको संज्ञा दिएका छन् । उनले प्रचण्डको हालत नाजुक भएको बताए ।